SomaliTalk.com » Xiddig
Home » Qoraallada Halkudhegga "Xiddig"
Luuqadda Casriga Ah ee Dhalinta
Qore: Cabdiraxman Maxammed (Xiddig) Email: Xiddig@gmail.com “Wait, wait Snapchat video aan ka qaadee”, ayuu yiri Salmaan. “Gaarigan naga horeeya parking-ka ayuu la rafaadsanyahay wallaahi. It is really funny how this guy is parking,” ayuuna sii raacshey inta qosley. Salmaan waxa uu ka duubey Video toban ilbiriqsi ah darawal gaarigii gelin la’ booskii loogu talagaley, ka dibna waxa uu galiyey...
Daryeel Hooyo iyo Dayac Aabo
Cabdiraxman Maxammed Cabdulle Qore: Xiddig@gmail.com “Macalinow, waxaan ku sameeyo waan garan la’ahay gabadhan,” ayeey tiri Fartuun. “Si walba waan ula hadlay. Oo waan u waaniyey. Oo wax waan ugu sheegey. Waxaan ku iri haddii aad iskuulka aadaab fiican ku yeelato oo aad buundo fiican ku keento oo aysan macalimiintu ka soo dacwoon wax walba ayaan kuu samaynayaa.” Fartuun waa hooyo Soomaaliyeed....
Aragtida Caqliga: Asalkeeda, Astaamaheeda iyo Aafooyinkeeda.
Qore: Abdirahman Maxamed (Xiddig) xiddig@gmail.com Waa nimco iyo naxariis Alle uu siiyo aadamaha. Waa hadiyad uu u hibeeyey dadka oo dhan. Waa deeq iyo darajo uu siiyey muslim iyo gaalba. Waa fadli iyo faa’iido ay dheeryihiin inta kale uu Alle abuurey. Waxaa lugu bartaa cilmiga. Ka dibna jahligaa looga baxaa. Waxaa lugu gartaa wanaaga. ka dibna wadadiisaa lugu raacaa. Waxaa lugu ogaadaa xumaanta....
Qore: Abdirahman Maxamed (Xiddig) Xiddig@gmail.com Haddii aynu fiirino oo aynu ka fakarno dadka ku nool Caalamka aynu ku dhex-noolnahay, waxaynu arkaynaa dadku in ay u qaybsanyihiin dad hormaray oo isku filnaasho nolosha ah xag walba ka gaarey iyo kuwo sabool ah oo calooshoodu dhulka ku dhegentahay, iyaga oo markaas u cawda dadka kale ee dunida kula nool si loo caawiyo. Su’aasha da’da weyn...
Mabaa’diida Afarta ah ee Badbaadisa Aadanaha
Qore: Abdirahman Maxamed (Xiddig) Q. 1aad Qodobada Qoraalka .Hordhac .Waqtiga .Xaqiiqda Aadanaha .Mabda’ Koowaad .Mabda’ Labaad .Mabda Saddexaad .Mabda Afaraad Hordhac Aadanaha adduunka ku nool mid walba badbaadada, sharafta iyo farxada meel ayuu ka raadshaa. Mid baa u maleeya maal la kasbado in ay badbaadadiisu ku jirto. Oo hadh iyo habeen wuxuu u soo jeedaa sida uu hanti u heli lahaa....
Qore: Abdirahman Moxamed (Xiddig) —————————— Bulshadu waxay badbaadaa marka dadkooda cilmiga iyo caqliga leh ay abaabul la yimaadaan. Taariikhda marka aad dib u eegto waxay kuu tabinaysaa dadka anfacay dadkooda in ay la yimaadeen hanweyn iyo hawlkarnimo. Hanka weyn wuxuu ku siiyaa hiraal. Oo horay ayaa waxaa loo yidhi: qof han yar leh, ma...
Maamulka iyo Maaraynta Dadka iyo Dacwada | Qore: Xiddig
Qore: Abdirahman Mohamed (Xiddig) ——————————— Waxaa iga keenay oo igu kalifay in aan qoraalka hortiina ah la raaco qalinka qiso Quraanka ku jirta oo waxbadan qalbigayga fakar ku reebtay. Waxaan ka fakaray oo fiir fiiriyay faaiidooyinka faraha badan ee ku lifaaqsan qisadan. Haddana waxaan eegay oo aan la yaabay xukunka ku xeendhaaban,...